नेपाल समूहलाई ६ मन्त्रालय, को को हुँदैछन् मन्त्री ?
मङ्लबार, साउन ५, २०७८ ९:१०
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह पनि सरकारमा जाने भएको छ । नेपाल समुहले ६ मन्त्रालयमा माग गरेको छ । तर धेरै दल सहभागी हुने सरकारमा मन्त्रालयको टुंगो भने लागेको छैन । एउटै पार्टीका फरक समुह भएका कारण देउवालाई मन्त्रालयको भाग लगाउन निकै समस्या परेको छ ।
नेपाल समुह पनि सरकारमा जाने भएपछि देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच भेटवार्ता भएका छ । माधव पक्षका नेता मेटमणी चौधरीले आफुहरु सरकारमा सहभागी हुने निष्कर्षमा पुगेको पुष्टि गरेका छन् । त्यसका बारेमा औपचारीक निर्णय लिन समुहको बैठक बस्दैछ । देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ सांसद बैठक बसेर त्यसवारे टुंगो लगाउने भएका हुन् ।
चौधरीले आफुहरुले ६ मन्त्रालयमा दावी गरेको भएपनि मन्त्रालयको टुंगो भने नलागेको बताएका छन् । बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा बस्ने नेपाल समुहको बैठकले त्यसवारे औपचारीक निर्णय गर्नेछ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपालको ठूलो भूमिका छ । उनले आफ्नै पार्टीको सरकार गिराएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउ संघर्ष गरेका थिए ।
मंगलवार बिहानमात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले नेता नेपाललाई भेटेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे पछि यसवारेमा धारणा बनेको हो । उक्त विषयमा प्रचण्डले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेका थिए।
जबराले अदालत छोडेर जानुपर्छ
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनुपर्छ - Madhav Kumar Nepal
रावल बन्दसत्रबाट बाहिरिए, आफू निकटसँग छलफलमा
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ: ९० प्रतिशत कुरा मिलिसक्यो
सुवास नेम्वाङ : सहमतिका लागि अध्यक्षले कुरा गरिराख्नुभएको छ
प्रकाशमान सिंह : विधि र नियम अनुसार नचल्दा कांग्रेसको छवि विग्रदै गयो
तपाईंबाहेक अरुलाई नेता मान्दिन : ओलीलाई नेम्वाङको सन्देश
नेतृत्वले प्रतिनिधिका भावनाको कदर गर्न सक्नुपर्छ, नसके चुनाव : योगेश भट्टराई भन्छन्
बादलहरुले अहिलेसम्म पनि उम्मेदवारीका लागि मुख नखोल्नुको रहस्य बल्ल खुल्यो !
सुत्नेबेला चितवनबाट ओलीका लागि आयो साह्रै नमिठो खबर, के गर्लान् अब ?
गगन थापा : अब एमालेमा केपी ओलीको ‘डनवाद’ मात्रै बाकी छ
रावल बन्दसत्रमा, ओली परामर्शमा
भीम रावल : टीका लगाएर बाँड्ने कुनै पनि पद मलाई स्वीकार्य छैन चुनाव नै लड्छु
अन्तिम लडाइँमा सुवास नेम्वाङ : एमाले महाधिवेशन
पूर्वमाओवादीलाई २ पदाधिकारी र ४० केन्द्रीय सदस्य दिने सहमति, रायमाझी सचिव र बादल उपाध्यक्ष